စတီဗင်စပီးလ်ဘာ့ဂ်အသက်၊ ဇနီး၊ ကလေးများ၊ မိသားစု၊ - နာမည်ကြီးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
စတီဗင်စပီးလ်ဘာ့ဂ်အသက်၊ ဇနီး၊ ကလေးများ၊ မိသားစု၊
မွေးနေ့ ဒီဇင်ဘာလ 18, 1946
အသက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်ကဲ့သို့) ၇၁ နှစ်
မွေးရပ်မြေ စင်စင်နာတီ၊ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ အမေရိကန်
ဇာတိမြို့ စင်စင်နာတီ၊ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ အမေရိကန်
ကျောင်းများ Arcadia အထက်တန်းကျောင်း၊ Phoenix
Saratoga အထက်တန်းကျောင်း၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်
အချစ် အပျော်တမ်းရုပ်ရှင်: - နောက်ဆုံးသေနတ် (၁၉၅၉)
ရုပ်ရှင်ရုံ - အမ်ဘလင် '(၁၉၆၈)
တီဗီ - Night Gallery (၁၉၇၀)
လိပ်စာ (FanMail) DreamWorks ကာတွန်း၊
ဝါသနာ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ ဂေါက်ရိုက်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ စန္ဒရားတီးခြင်း
ဆုများ, ဂုဏ်ထူး, အောင်မြင်မှုများ အကယ်ဒမီဆု
အကောင်းဆုံးသောဒါရိုက်တာနှင့် 'Schindler's List' အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံဆု (၁၉၉၄)
'Saving Private Ryan' အတွက်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု (၁၉၉၉)
'Schindler's List' အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု (၁၉၉၃)
E.T. အတွက်အကောင်းဆုံးပြဇာတ်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ မြေပြင်'ရိယာ (၁၉၈၃)
အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ပုံလွှာ - ဒရာမာဆုနှင့် 'Schindler's List' အတွက်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု (၁၉၉၄)
A.I. အတွက်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုရရှိ Artificial Intelligence '(၂၀၀၁)
ရေးရာ / မိန်းကလေး အေမီ Irving (1979-1989) (ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားမင်းသမီး)
Valerie Baternilli (၁၉၈၀) (တီဗွီမင်းသမီး)
Sarah Miles (အင်္ဂလိပ်ပြဇာတ်ရုံနှင့်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး)
Margot Kidder (ကနေဒါ - အမေရိကန်မင်းသမီး)
Janet Maslin (ဂျာနယ်လစ်)
Kate Capshaw (၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်အထိ) (မင်းသမီး)
ဒက်ဘီအယ်လင် (မင်းသမီး၊ ကချေသည်၊ Choreographer, ရုပ်မြင်သံကြားဒါရိုက်တာ)
အိမ်ထောင်ရေးနေ့များ နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၁၉၈၅ တွင်ပထမဇနီးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်
၁၉၉၁ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင်ဒုတိယဇနီးနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်
ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် ပထမဇနီး - အေမီ Irving (အမ် 1985; Div ။ 1989)
ဒုတိယဇနီး - ကိတ် Capshaw (အမ် 1991)
ကလေးများ သားများ - Max Spielberg (သရုပ်ဆောင်)၊ Theo Spielberg (မွေးစား), Sawyer Avery Spielberg (သရုပ်ဆောင်)
သမီးတို့ - Sasha Spielberg (သရုပ်ဆောင်နှင့်ဂီတပညာရှင်)၊ Destry Allyn Spielberg၊ Mikaela George Spielberg, Jessica Capshaw (မင်းသမီး)
မိဘများ ဖခင် - အာနိုးစပီးလ်ဘာ့ဂ် (လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကွန်ပျူတာရှေ့ဆောင်)
အမေ - လီယာအက်ဒလာ (စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးစန္ဒယားပညာရှင်)
ညီအစ်မများ - အန်းစပီးလ်ဘာ့ဂ် (ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ)၊ နန်စီစပီးလ်ဘာ့ဂ် (မင်းသမီး)၊ Sue Spielberg
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ McAloon ရဲ့ကြက်အိုး Pot
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင် စိတ်ကူးယဉ် (1940)
အကြိုက်ဆုံး Candy Reese ရဲ့အပိုင်းပိုင်း
အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းဇာတ်ကောင် Daffy ဘဲ
အကြိုက်ဆုံးပန်းချီဆရာ -Norman Rockwell
ကားများစုဆောင်းခြင်း Chrysler 300 C၊ Honda CRV, Aston Martin DB9 Volante, Land Cruiser LC, Tesla Model S
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံ (၂၀၁၈ တွင်ကဲ့သို့)
စပီးလ်ဘာ့ဂ်၏အဖေဘက်ကအဘိုးအဘွားများသည် ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ယူနိုက်တက်စတိတ်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချသည့်ယူကရိန်းဂျူးများဖြစ်သည်။
ရှေးရိုးစွဲဂျူးလူမျိုးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူသည်ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး (ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး) စိတ်စွန်းကွက်မှုနှင့်အနိုင်ကျင့်ခြင်းများကိုခံစားခဲ့ရသည် -“ အထက်တန်းကျောင်းမှာငါရိုက်နှက်ခံရတယ်။ နှစျခုသွေးထွက်သံယိုနှာခေါင်း။ ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ရာပဲ” ဟုစပီးလ်ဘာ့ဂ်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
သူအသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာရုပ်ရှင်တွေစခဲ့တယ်။
Spielberg သည်ကလေးဘဝတုန်းက ၈ မီလီမီတာရှိသောကင်မရာဖြင့်မိသားစုဖြစ်ရပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးသူ၏ညီမများနှင့်အတူထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရုပ်ရှင်အချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မိမိအရုပ်ရှင် Amblin '' (1968) ၏အာရုံကိုတယ် Universal ရုပ်ပုံများ သူကခုနစ်နှစ်စာချုပ်ဖို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သူသည်ပထမဆုံးဇနီးဖြစ်သူအေမီနှင့်ကွာရှင်းခဲ့စဉ်ကသူသည်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ တန်သောမမအားပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သမိုင်းတွင်တတိယမြောက်အကုန်အကျအများဆုံးကွာရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။
သူသည်အင်ဒီယာနာဂျုံးစ်နှင့်ဘုရားကျောင်း Doom တွင်သူမနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်သူ၏ဒုတိယဇနီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၁၉၇၇ တွင်ဂျော့ခ်ျလူးကပ်စ်သည်စပီးလ်ဘာ့ဂ်အတွက်ဒေါ်လာ ၄၀ သန်းတန်လောင်းကြေးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ စပီးလ်ဘာ့ဂ်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ဤဇာတ်လမ်းကိုပြောကြားခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ဆီလာပြီး 'အိုဘုရားသခင်၊ မင်းရဲ့ရုပ်ရှင်က' Star Wars 'ထက်အများကြီးပိုပြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ ဤသည်အားလုံးအချိန်အကြီးမားဆုံးထိခိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီအစုံကိုမယုံနိုင်ဘူး သင်ရရှိသောအရာကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလည်းမယုံနိုင်နိုင်ပါ။ '' ကောင်းပြီ၊ ငါဘာပြောမယ်ဆိုတာငါပြောမယ်။ ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအချို့သောအချက်များကုန်သွယ်မှုပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအခြို့သောအချက်များကုန်သွယ်ချင်? သငျသညျအကြှနျုပျကို၏ 2.5% ပေးလျှင်ငါသည်သင်တို့ကို '' Star Wars '' ၏ 2.5% ပေးလိမ့်မယ် '' အနီးကပ် Encounters ။ '' ဒါနဲ့ငါ '' သေချာတာပေါ့ငါနှင့်အတူလောင်းကစားပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းတယ် လူးကပ်စ်၏ရုပ်ရှင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ box Office ရဲမှာ $ 775 သန်းလုပ်နေစဉ်နောက်ပိုင်းတွင် Close ကိုတှေ့ဆုံ $ 304 သန်းကိုဖန်ဆင်း။
သူ၏ရုပ်ရှင် Jurassic Park သည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်စုစုပေါင်းဝင်ငွေအများဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
စပီးလ်ဘာ့ဂ်သည်သူ၏ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ရုပ်ရှင် 'Schindler's List' ကိုလုပ်ခြင်းအတွက်မည်သည့်လစာမျှမရခဲ့ပါ။ ဤရုပ်ရှင်သည်အကယ်ဒမီဆုခုနစ်ဆုရရှိခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တော်တော်များများဟာ Spielberg ကို Oscar Schindler ရဲ့အခန်းကဏ္ for အတွက်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့ပေမယ့်သူက Liam Neeson ကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်တွင် Liam Neeson သည်လူကြိုက်များခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူသည်ဤရုပ်ရှင်မှအောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်သူသည် TIME မဂ္ဂဇင်းမှ 'ရာစု၏အရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀' တွင်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
မင်းသမီး Drew Barrymore သည် Playboy မဂ္ဂဇင်းအတွက်ဝတ်လစ်စလစ်ဝတ်ဆင်သောအခါစပီးလ်ဘာ့ဂ်ကစောင်နှင့်“ ဖုံးကွယ်ထား” ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်မင်းသမီး Drew Barrymore နှင့် Gwyneth Paltrow တို့၏ခေါင်းကိုင်ခေါင်းဆောင်ဖခင်ကြီးဖြစ်သည်။
စပီးလ်ဘာ့ဂ်သည်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းတွင်အကြီးမားဆုံးသေနတ်ကိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သူသည်သူ၏ခွေးများကိုသူ၏ရုပ်ရှင်အတော်များများတွင်ချပြခဲ့သည်။ Spielberg ၏ Cocker Spaniel Elmer သည် 'The Sugarland Express'၊ 'တတိယမျိုးနွယ်၏အနီးကပ်ရင်ဆိုင်ခြင်း'၊ '၁၉၄၁' နှင့် '' မေးရိုးများ '' ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များတွင်ပြသခဲ့သည်။
သူသည် Primetime Emmys ဆု ၄ ခုနှင့် Daytime Emmys ဆုခုနစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။
သူသည် mulayam Singh က yadav ဖြစ်ပါတယ်
bk ညီမလက်ထပ် shivani ဖြစ်ပါတယ်
အထူး ops အတွက် ikhlaq Khan
Soha Ali Ali ခင်ပွန်းအမည်
မွေး prajwal devaraj နေ့စွဲ